Khilaafka Soomaaliya iyo kenya: ''Kismayo waxaan ku tagnay oggolaansho aan ka heysanay Dowladda Federaalka Soomaaliya'' - BBC News Somali
Khilaafka Soomaaliya iyo kenya: ''Kismayo waxaan ku tagnay oggolaansho aan ka heysanay Dowladda Federaalka Soomaaliya''
4 Nofembar 2019
Lahaanshaha sawirka UN
Image caption Kamau ayaa wareysi gaar ah siiyay BBC-da
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in wafdigii ka socday dalkeeda ee dhawaan tegay Magaalada Kismayo, kana qeybgalay caleemasarka madaxweynaha Jubaland ay oggolaansho ka heysteen dowladda Soomaaliya.
Xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, Macharia Kamau, oo la hadlay BBC-da ayaa ka hadlay khilaafka dibolmaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya.
Macharia ayaa sheegay in haatan xiriirka labada dal uu wanaagsan yahay, inkastoo ay jeclaan lahaayeen in arrinta badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ.
Qaar ka mid ah siyaasiinta Soomaalida ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay in ay faragelisay doorashadii dhawaan ka dhacday Jubaland oo ay la safatay hal dhinac.
Siyaasiintan ayaa xiligaas sheegay in Kenya ay ku xadgudubtay hawada Soomaaliya, maadama diyaarad ka timid Kenya ay toos uga degtay Kismaayo, taas oo loo arkayay in ay baalmartay amarkii dowladda federaalka ee ahaa in dhammaan diyaaradaha tegaya Kismaayo ay soo maraan Muqdisho.
Sidoo kale diyaarad ay la socdeen wafdi ka socday Kenya ayaa ka degtay magaalada Kismayo, si ay uga qeybgalaan caleemasaarka Madaxweynaha Jubaland, waxaana arrintaas aan wax ka weydiinayay Macharia Kamau.
''Kenyaan-ka jooga Soomaaliya oo ay ka mid yihiin kuwii dhawaan halkaas u tegay sidii ay ugu dabbaaldegi lahaayeen guusha doorashadii xorta iyo xalaalsha ahayd ee sida nabdoon uga qabsoontay Jubaland, waxay halkaas ku joogeen aqoonsi iyo oggolaansho ay ka heysteen dowladda Soomaaliya, qasab kuma aysan tegin halkaas, dowladda Soomaaliya si buuxda ayay uga warheysay'', ayuu yiri xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, Macharia oo la hadlayay BBC-da.
Macharia ayaa ku celceliyay in dowladda Soomaaliya ay sii ogeyd wafdigii ka qeybgalay caleemasaarka madaxweynaha Jubaland, oo aysan jirin wax xad-gudub ah oo Kenya ay ku sameysay Soomaaliya.
Hadalka dowladda Kenya ee ah in doorashadii dhawaan ka dhacday Jubaland ay ahayd mid xor iyo xalaal ah, si nabad ahna ku qabsoontay ayaa ka hor imanaya warqad ay dowladda federaalka Soomaaliya soo saarta kadib doorashadii Jubaland, warqadaas oo ay ku sheegtay in aysan aqoonsaneyn doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismayo.
Wafdigii ka socday Kenya ee ka qeybgalay caleemasaarka madaxweynaha Jubaland ayaa waxaa hoggaaminayay Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee Kenya iyo Sanetar Yuusuf Xaaji oo laga soo doorto Gaarisa.
Lahaanshaha sawirka Aden Ducaale
Image caption Aden Ducaale ayaa kamid ah dadkii ka qeybgalay caleema saarka Madaxweynaha Jubaland
Macharia ayaa sheegay in diyaaraddii dhawaan ka degtay Magaalada Kismayo ee ka duusha dalka Kenya aysan ahayn mid laga leeyahay Kenya, oo ay tahay diyaarad Soomaaliya laga leeyahay, diyaaradaas oo Jubaland ay sheegtay in ay soo iibsatay.
''Diyaaradaas la sheegay in ay tahay diyaarad laga leeyahay dalka kenya, ma ahayn sidaas oo waxay ahayd diyaarad yar oo ay Soomaali leedahay, mana jirto in diyaaradaas ay ka diiwaan gashan tahay dalka Kenya'', ayuu yiri Macharia.
Dowladda federaalka ayaa diyaarad uu raaci lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ka hor istaagtay in ay u duusho magaalada Kismaayo, arrintaas oo buuq badan dhalisay, inkastoo markii dambe uu ka qeybgalay caleemasaarka madaxweynaha Jubaland.
Dowladda Soomaaliya ayaa si ay ula socto waxa tegaya Kismaayo iyo waxa ka baxaya, waxay dhammaan diyaaradaha tago Kismayo iyo kuwa ka yimaada ku amartay in ay soo maraan magaalada Muqdisho.
Waxaan isku daynay in aan la xiriirno dowladda Soomaaliya, si aan wax uga weydiino arrintan, balse wali wax jawaab ah kama aanan helin.
Macharia Kamau ayaa sidoo kale sheegay in aysan wax dhib ah ku qabin shacabka Soomaaliya, balse maamulka hadda jira uu yahay waxa ay is hayaan.
''Dabcan wuuu naga dhexeeyaa muranka xuduudda, balse waxaa dabada ka riixaya hoggaanka Soomaaliya oo si aasaasi ah ugu guul dareystay in uu ka mahadceliyo ama garto waxa naga dhaxeeya," ayuu yiri.
Kiiska ayay maxkamadda dib u dhigtay ilaa bisha June ee sannadka soo socda, taas oo Macharia uu ka yiri: "waa wixii aan dooneynay. sannad baan rabnay waana helnay wax ku dhow."
Kenya: Shacabka Soomaaliya dhib kuma qabno ee maamulka ayaan is heynaa
Kenya ma waxa ay aqoonsatay Somaliland?
Lahaanshaha sawirka Macharia Kamau
Image caption Xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, Macharia Kamau
Xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo la weydiiyay waxa ay ka yeeli doonaan go'aan walba oo ka soo baxa maxkamadda wuxuu yiri: Anagoo ka duuleyna waxa ay ku saleyso go'aankeeda, waxaan eegi doonaa wuxuu noqdo go'aanka, anaguna go'aan ayaa ka gaari doona
"Waa wax u madaxbannaan in dal kasta uu go'aansado in uu aqbalayo xukunka maxkamadda, marka la gaara xilligaasna go'aan ayaan gaari doonaa''. Ayuu markale raaciyay Macharia.
Maxkamadda caddaaladda adduunka ee ICJ ayaa mar labaad dib u dhigtay dhageysiga dacwadda la xiriirta muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Maxkamadda ayaa la filayay in ay dacwaddaasi dhageysato laga billaabo afarta ilaa siddeedda bisha Nofembar ee sanadkan, haseyeeshee dowladda Kenya ayaa mar labaad dalbatay in arrintaasi dib loo dhigo.
Waa markii labaad oo maxkamadda ay dhageysiga dacwaddani dib u dhigayso, waxaana bishii Sebteembar ay laba bilood dib u dhigtay ka dib markii ay Kenya codsatay in dacwadda dib loo dhigo muddo sanad ah.
Warbixin qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay go'aansatay in dib loo dhigo dacwadda badda, waxaana maxkamaddu sheegtay in labada dhinac loo garnaqi doono siddeedda ilaa 12-ka bisha Juun ee sanadka dambe.a".